R. Jean Nirina : hilatsaka depiote amin’ny 2018 | NewsMada
R. Jean Nirina : hilatsaka depiote amin’ny 2018
« Ny lalàna no olana eto Madagasikara. Eo koa ny tsy fahaizana mankatoa ny lalàna. Variana miady ny tombontsoany ny ankamaroan’ireo depiote eto amintsika ka tsy mijery ny olam-bahoaka fa variana amin’ny resaka fiara 4×4. Olan’ny depiote no misy eto fa tsy olam-bahoaka”, hoy ny fanazavan’ny filohan’ny Hafari Malagasy, Rafanomezantsoa Jean Nirina nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly. Nohamafisiny fa hilatsaka ho isan’ireo hofidina solombavambahoaka ny tenany taona 2018 noho ny fahitany ny olana mianjady amin’ny vahoaka indrindra ny lafiny sosialim-bahoaka. Hiasa ho an’ny vahoaka ny antom-piasian’ny depiote, hitondra ny hetahetan’izy ireo fa tsy lany andro hiady tombontsoa manokana.
Nilaza izy fa tsy manao valifaty amin’ny mpiara-belona aminy na eo aza ny fanenjehana nahazo azy ka niafara tamin’ny fidirany teny am-ponja. “Tsy hamaly faty ny mpiray tanindrazana amiko aho na iza na iza”, hoy hatrany izy.
Nambarany fa mitohy ny tetikasa rehetra ho fiahiana ny sosialim-bahoaka sy ny fanampiana ny mpiara-belona na teo aza ny krizy nandalo teo aminy nandritra ny herintaona sy iray volana nitazonana am-ponja azy. Tamin’izany ny nahitany fa tokony hojerena manokana ny zon’ny voafonja. Tsy midika hoe ariana ny olona iray rehefa ampidirina am-ponja. Manan-jo mitovy amin’ny olona rehetra ny voafonja. Hisehatra mafimafy ao anatin’ny fiarovana ny zon’ny voafonja ny Hafari Malagasy amin’izao.